वार्ता चलिरहँदा इजरेलद्वारा इरानको परमाणु कार्यक्रमको कटु आलोचना
Homeअन्तराष्ट्रियवार्ता चलिरहँदा इजरेलद्वारा इरानको परमाणु कार्यक्रमको कटु आलोचना
इजरेलका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई इरानको खतराबाट 'ब्युँझन'आह्वान गरेका छन्।
इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित तुल्याउन वार्ताहरू चलिरहँदा नाफ्ताली बेनेटले इरान 'क्रूर रूपमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिने सत्ता' भएको र उसले परमाणु अस्त्र चाहेको बताए।
इरानले त्यस्ता आरोप बारम्बार अस्वीकार गरिरहेको छ।
कूटनीतिज्ञहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका अलग भएको परमाणुसम्बन्धी सम्झौतालाई नवीकरण गर्न प्रगति भइरहेको बताएका छन् तर अझै फरक मतहरू रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
इजरेलले उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै आएको छ।
इरानले देशका अति पुरातनवादी विचार राख्ने सर्वोच्च न्यायाधीश एब्राहिम राइसीलाई नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा शुक्रवार चुनेको थियो।
अगस्टमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध छ र राजनीतिक बन्दीहरूलाई विगतमा मृत्युदण्ड दिएको आरोप लागेको छ।
गएको एप्रिल यता संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीले इरानसँग परमाणु अस्त्र सम्झौतालाई पुन: सक्रिय बनाउन वार्ता गरिरहेका छन्। सन् २०१५ मा सम्झौता भएपछि इरानले प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएका जवाफमा आफ्ना परमाणु गतिविधिलाई केही सीमित तुल्याएको थियो।
तर अमेरिका एकपक्षीय रूपमा सम्झौताबाट अलग भएपछि इरानले उक्त सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरिरहेको छ।
आइतवार भियनामा अमेरिका र इरानबीचको अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए। तर त्यो स्थगित गरेर प्रतिनिधिहरू आआफ्ना राजधानी फर्किएका छन्।
इरान परमाणु सङ्कट: आधारभूत जानकारी
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले इरानलाई विश्वास गर्दैनन्: केही देशहरूले इरानले परमाणु बम बनाउन चाहेकाले उसले परमाणु शक्ति राखि राखेको बताउँछन्। तेहरानले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
त्यही भएर एउटा सम्झौता गरिएको थियो: सन् २०१५ मा इरान र अरू ६ वटा देशबीच एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भयो। त्यसमा इरानले आफ्नो अर्थतन्त्रमा आघात पर्ने गरी लगाइएका कडा प्रतिबन्ध वा सजाय फिर्ता लिइए परमाणुसम्बन्धी केही काम रोक्ने सहमति जनायो।
अहिलेको समस्या के हो? राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्दै इरानमाथि फेरि प्रतिबन्धहरू लगाएपछि इरानले प्रतिबन्धित परमाणुसम्बन्धी गतिविधि पुन: सुरु गर्‍यो। नयाँ राष्ट्रपति बाइडनले अमेरिका उक्त सम्झौतामा पुन: जोडिने बताए पनि पहिलो कदम अर्कोले चाल्नुपर्ने दुवै पक्षले बताइरहेका छन्।
इरानका उप विदेशमन्त्री अब्बास आराक्चीले सरकारी टेलिभिजनलाई सम्झौताका पक्षधरहरू पहिलाभन्दा सहमतिको नजिक रहेको बताए पनि बाँकी रहेका विषयमा दूरी कम गर्नु सजिलो नभएको बताए।
युरोपेली सङ्घका राजदूत एनरिके मोराले प्राविधिक विषयवस्तुमा भएका प्रगतिले राजनीतिक समस्याबारे पनि स्पष्ट अवधारणा बनाउन सजिलो भएको जनाए।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलीभानले प्रतिबन्ध र इरानले जनाउनुपर्ने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा अझै धेरै बाँकी रहेको बताए।
इरानले अहिले हालसम्मकै उच्चतम तहमा युरेनियमन प्रशोधन गरिरहेको छ। तर त्यो परमाणु अस्त्र बनाउने तहको प्रशोधन नभइसकेको बताइन्छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक जना प्रवक्ताले रइसी सत्तामा आएपछि पनि अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रहने बताए।
किन इजरेलले सम्झौताको विरोध गरिरहेको छ?
इजरेल र इरान लामो समयदेखि 'छाँया युद्धमा' छन् जसका कारण उनीहरू सीधा मुठभेडभन्दा पनि एक अर्काले चाल्ने कदमको जवाफ फर्काइरहेका छन्।
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खामेनेईले बारम्बार इजरेल राज्यको उन्मुलनको माग गरिरहेका छन्। उनले सन् २०१८ मा इजरेललाई 'क्यान्सरको ट्युमर' भन्दै त्यसलाई उक्त क्षेत्रबाट हटाइनुपर्ने बताएका थिए।
इजरेलले इरानलाई एउटा प्रमुख खतराका रूपमा लिने गर्छ र उसले बारम्बार इरानले परमाणु अस्त्र विकास गर्न चाहेको अडान लिँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री बेनेटले आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई यो विश्व शक्तिहरूका लागि ब्युँझने अन्तिम मौका भएको र उनीहरूले आफूहरूले कोसँग काम गरिरहेको छौँ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए।
हालै इरान र इजरेलबीच तनावहरू बढेका छन्। अघिल्लो वर्ष आफ्ना एक जना प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकको हत्या र एप्रिलमा आफ्नो युरेनियम प्रशोधन केन्द्रमा भएको हमलामा इजरेल जिम्मेवार रहेको इरानले आरोप लगाएको छ।